Knowledge Archives - Page 31 of 70 - Khitamyin
ဒေါ်လာဈေးကွက်ပျက်ပြီး တစ်ဒေါ် လာ ၂၇၀၀ အထိ မြင့်တက်၊ ရွှေဈေး ၂၂ သိန်းရောက်ရှိ ၊ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျမှု စကစ ထိန်းမနိုင်တော့ ပြည်တွင်းငွေလဲဈေးကွက်တွင် မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးကျနေမှုကို မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ…
အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဝယ်သူမှ မဖြစ်မနေသိထားရမည့် အရေးကြီးသည့်အချက်
အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်ကိစ္စများတွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မည့်မြေကွက်သည် ရောင်းသူအမည်ပေါက်ဖြစ်စေ၊ အမည်မပေါက်သည်ဖြစ်စေ၊ ဂရန်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ဂရန်မရှိသည်ဖြစ်စေ၊မြေအမျိုးအစားသည် လယ်မြေ၊ယာမြေ၊ရွာမြေ၊ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊စသည့်မည်သည့်မြေအမျိုးအစားပင်ဖြစ်စေ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်သော မြေ သည်ရောင်းသူ၏ လက်ဝယ်တွင် ရှိမရှိဆိုသည့် ကိစ္စသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မည့်မြေ သည်…
(၁)ထမင်းပူကို မစားနဲ့။(၂)ကြွေသီးကိုသာ စားပါ။(၃)ရောက်ရာဒေသ ခြေရာချခဲ့ပါ စကား(၃)ခွန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် – (၁) သမီး ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ ထမင်းပူကို မစားပါနဲ့။ထမင်းအေးကိုပဲ စားပါ သမီး။ထမင်းပူဆိုတာ သူတစ်ပါး မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျမှ…
အဆီအဆိမ့်များတဲ့ ဒံပေါက် ၊ အုန်းနို. ၊ မျှစ်ချဉ် ၊ တညင်းသီး တို့ကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင် စားသုံးနည်း
အဆီအဆိမ့်များတဲ့ ဒံပေါက် ၊ အုန်းနို. ၊ မျှစ်ချဉ် ၊တညင်းသီး တို့ကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင် စားသုံးနည်း အန္တရာယ်ကင်းအောင် စားသောက်နည်းများ ၁။ အဆီအအိမ့် များလွန်းသော ဒံပေါက် ထမင်း…
လူအချို့ကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရယ်လို့ ဖြစ်တည်လာပြီဆိုတာနဲ့ မိမိနိုင်ငံကို တိုင်းတစ်ပါးရန်ကနေကာကွယ်ဖို့ စစ်တပ်ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒီအယူအဆက ရာနှုန်းပြည့်တော့ မှန်ကန်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်တပ်မရှိဘဲ ရပ်တည်နေတဲ့ နိုင်ငံများစွာရှိပါတယ်။ အခုတခါမှာတော့ ဒီနိုင်ငံတွေထဲက…
သီပေါမင်းရဲ့ ရင်သွေးကိုလွယ်ထားပါလျက်နှင့် ဘာကြောင့် ဒိုင်းခင်ခင် အသတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းအမှန်
သီပေါမင်းရဲ့ ရင်သွေးကိုလွယ်ထားပါလျက်နှင့် ဘာကြောင့် ဒိုင်းခင်ခင် အသတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းအမှန် သီပေါ မင်း သည် စုဖုရားလတ်တစ်လင်တစ်မယားစနစ်၏ ပြင်းထန်သော အပြစ်ပေးမှုများအားသိရှိပါသော်လည်း…… အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိမိန်းမချောလေး ဒိုင်းခင်ခင်…
Google Chrome သုံးသူများအတွက် အထူးသတိပေးချက် Google ထုတ်ပြန် Zero-Day Exploit ထပ် ကြုံတာပါ သုံးစွဲသူ သန်း ၂၆၀၀ ကျော် ရှိတဲ့ Google…
လူသိနည်းလှတဲ့လှေကားအဆံ တပ်ဆင်ခြင်း သိကောင်းစရာမျှဝေပါတယ်။ ရှေ့ထုံးလည်းမပယ်နဲ့ စျေးသုံးလဲမကြွယ်နဲ့စကားမျိုးလိုပါပဲ။ အိမ်တစ်အိမ်ဆောက်ရာတွင်း အဓိကအရေးကြီးတာ အိမ်လှေကား ပြုလုပ်ခြင်းပါပဲ။ ရှေးကျမ်းဆရာတို့သည် စုံ မ နှစ်ခုလုံး တပ်ကောင်း၏ဟုဆိုသည် လက်သမား ကျမ်းဆရာတို့က…
« 1 … 29 30 31 32 33 … 70 »